Iyo itsva vhezheni ye0 AD Alpha 25 Yaunā yakatoburitswa | Linux Vakapindwa muropa
Wildfire Mitambo ichangobva kuzivisa kuburitswa kweshanduro nyowani yekudada kuzivisa kuburitswa kwe0 AD Alpha 25: "Yaunā". Iyi vhezheni itsva inouya nekuvandudzwa kwehungwaru hwekunyepedzera, kutsvaga, nzira nezvimwe.
Kune avo vasingazive nezve 0 AD vanofanira kuziva izvozvo Iyi inguva-chaiyo zano mutambo ine yepamusoro-soro 3D giraidhi uye Gameplay yakafanana chaizvo nemitambo muZera reEmpires akateedzana. Kodhi yekodhi yemutambo yakaburitswa neMitambo Yemoto pasi peGPL mushure memakore mapfumbamwe ebudiriro sechigadzirwa chepamutemo. Iyo yazvino vhezheni inotsigira network kutamba uye bot single player kutamba pane pre-modeled kana zvine simba zvinogadzirwa mepu. Mutambo uyu unofukidza zvinopfuura gumi zvebudiriro kubvira 9 BC C. kusvika 500 d. C.
Zvisiri-kodhi zvikamu zvemutambo, senge magirafu uye kurira, zvakapihwa marezinesi pasi peCreative Commons BY-SA rezinesi, iyo inogona kuchinjwa uye kushandiswa muzvigadzirwa zvemabhizimusi, zvakapihwa zvinobva pamabasa zvinopihwa uye kugoverwazve pasi peirisensi yakafanana.
Injini yemutambo 0 AD ine zviuru zana nemakumi mashanu emitsetse yekodhi muC ++, OpenGL inoshandiswa kuratidza mifananidzo ye150D, OpenAL inoshandiswa kushanda nezwi, uye ENet inoshandiswa kuronga mutambo wenetiweki. Mimwe yakavhurwa sosi mapurojekiti ekugadzira mazano munguva chaiyo ndeaya: Glest, ORTS, Warzone 3 uye Chitubu.
1 Makuru matsva maficha e0 AD Alpha 25
2 Maitiro ekuisa 0 AD paLinux?
Makuru matsva maficha e0 AD Alpha 25
Mune iyi vhezheni itsva tinopa kutanga kuitiswa kweumwe mutambi mutambo, pamwe neakasiyana GUI kuvandudza uye epamberi magadzirirwo emifananidzo akawedzerwa.
Zvakare mune iyi vhezheni itsva kuwiriranisa pakati pevhavha uye mutengi muvazhinji kwakagadziridzwa zvakanyanya, kubvira ikozvino kunonoka kwadzikiswa, pamusoro pekuti iko kuita kwekodhi kwakagadziridzwa pakutsvaga kwenzira.
Imwe shanduko inomira kubva pa0 AD Alpha 25 ndiyo kugadziriswazve kwekuitwa kwema biomes anoshandiswa kuteedzera mamiriro ekuona nekubatanidza machira uye zvinhu zvakasikwa semiti nemhuka. Iyo itsva vhezheni wedzera nyowani-yakamisikidzwa nharaunda ine 2k resolution.
Pamusoro pekuwedzera kweiyo kugona kugadzirisa mabasa, vatambi vava kugona kufambisa mabasa kumusoro kwemutsara wekuurayiwa.
Yakagadziriswa AI kuitiswa kwezvikamu.
Yakagadziridzwa rutsigiro rwema mods uye kusefa mune yevatambi vazhinji roster.
Kuenzanisa kwehunyanzvi hwemagariro kwaenderera mberi.
Finalmente kana iwe uchifarira kuziva zvakawanda nezvazvo yeiyi vhezheni itsva, unogona kutarisa ruzivo Mune inotevera chinongedzo.
Maitiro ekuisa 0 AD paLinux?
0 AD mutambo unozivikanwa kwazvo uyo wakasanganisirwa muzvinyorwa zvezvakawanda zvekugovera kwenguva yakati rebei, saka kuiswa kwayo hakufanirwe kuda chero chinhu chekuwedzera. Tichafanirwa chete kuvhura terminal pane yedu system uye nekuisa mutambo neinotevera kuraira maererano neLinux kugovera iwe yauri kushandisa.
Si uri Debian, Deepin OS, Ubuntu, Linux Mint, Elementary mushandisi pakati pezvimwe zvinogoverwa zvinobva pane izvi, unogona kuwana mutambo mune yako software centre yekugovera kwako kana unogona kuisa mutambo pamwe nemirairo inotevera:
Muchiitiko chevashandisi veArch Linux, Manjaro, Antergos, Arch Labs uye chero kugoverwa kwakatorwa kubva kuArch Linux, tinogona kuisa mutambo nemirairo inotevera:
Nguva kune avo vanoshandisa Fedora, Korora kana chero kugoverwa kwakatorwa kubva kuFedora kunogona kuisa nemurairo uyu:
Para nyaya yeavo vanoshandisa chero vhezheni ye openSUSE vanogona kuwana mutambo munzvimbo yemutambo iyo iwe yaunokwanisa kugonesa nerubatsiro rweYaST.
Nenzira imwecheteyo, kubva kumagumo iwe unogona kuiwedzera nemirairo inotevera:
Pakupedzisira, kune avo vashandisi veGentoo vanoisa mutambo ne:
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » Zvirongwa » Linux Mitambo » Iyo itsva vhezheni ye0 AD Alpha 25 Yaunā yakatoburitswa kare
Thunderbird 91 inosvika pamwe nekuvandudzwa muiyo interface, mukarenda, encryption uye zvimwe zvakawanda